musha > Travel Europe > Most Bike Friendly Cities In Europe And How To Get There
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 27/12/2019)
Kana uchida kuona mamwe muEurope anofanira-shanyira dzokugara, vashoma zvikuru bhasikoro maguta noushamwari zvirokwazvo kuti zvaunonyora. Maguta aya makuru kuongorora kubudikidza bhasikoro, uchiita yakanaka rwendo bhajeti. Uye iwe unogona kuwana ikoko nechitima. Heano zvikuru bhasikoro ushamwari maguta gumi muna Europe:
1. Bhasikoro-Friendly Amsterdam, Netharenzi
Amsterdam yave rinonyanya bhasikoro maguta ushamwari mu Europe. It akakutsaurai kutenderera pamakwara pachinzvimbo Lanes, kubvumira kuti kuenda kwose kwose motokari isina. Unogona kusvika nayo nyore nokuda chitima kubva Paris, kweBrussels, Copenhagen nedzimwe dzakasiyana zvikuru European.
2. Bhasikoro-Friendly Copenhagen, Dhenimaki
Copenhagen paakapiwa pamusoro € mamiriyoni 134 kupinda kuva kwayo kuchovha Network mumakore. Kuti zvakaita kuti avo kutenderera nzira Network zvinoorora uye vatanga Copenhagen kuva pakati greenest European dzakasiyana.
3. Bhasikoro-Friendly Berlin, Jerimani
Berlin wakabata kuva mumwe zvikuru bhasikoro maguta noushamwari mu Europe kwekanguva. Pakupedzisira vakaita nayo, nemhaka wemaoresa pamushandirapamwe ari kuchovha vemunharaunda. Somumwe hubs kuEurope chitima motokari, Berlin rakanyatsojeka nyore kusvika.
4. Utrecht, Netharenzi
Cities in Netharenzi rudo mabhasikoro avo. Utrecht invests chaizvo kupinda bhasikoro kwayo kwezvivako. Long bhasikoro migwagwa uye huru kupaka zvivako kuti nyore kushandisa bikes ikoko.
5. Antwerp, Bherujiyamu
Antwerp ndiro guta vakawanda bhasikoro ushamwari Belgium kuti, aine dzakabudirira samambure kuti kuchovha Makwara. With makuru zvirongwa zvainanga kuvandudza nayo mberi, Antwerp zvirokwazvo kugara pakati pamusoro kuchovha dzokugara mu Europe.
6. Vienna, Ositiriya
Vienna Anozvirumbidza pakutevedzera Europe yokutanga kago bhasikoro Rental maitiro. Zvimwewo vakaedza kuti guta zvakawanda anondibhadharira kuti Vienna zvakawanda bhasikoro-ushamwari ari kuvaka 1300-? Km kubva kutenderera nzira samambure.
7. muBasel, Siwizarendi
MuBasel rizivikanwe mashoma zvinhu, uye kuva bhasikoro-ushamwari mumwe wavo. Chero ekunze kana mwaka, unogona kuona vagari muBasel vachishandisa mabhasikoro avo kufamba famba nyore. Unogona kusvika muBasel kubva kuAmsterdam nechitima zvakananga.
8. Münster, Jerimani
pakati Germany vakawanda bhasikoro noushamwari maguta, Münster anochengeta ane zvinzvimbo zvepamusoro dzose zvakanaka. Guta kushanda zvakaoma nechokwadi cyclists vanofara rayo kuchovha kwezvivako uye kuchengeteka.
Essen Münster Zvitima
Bielefeld Münster Zvitima
Cologne Münster Zvitima
Hanover Münster Zvitima
9. Verona, Itari
Maguta Italian kazhinji havasi rinonyanya bhasikoro maguta ushamwari mu Europe, asi Verona anomira kwazvo. Chinhu guta guru kuna pasura nebhasikoro, uye chitima atasve kubva Rome kuna Verona chete kunowedzera kunaka kwako rwendo.
10. Munich, Jerimani
Munich ane hurongwa hwakajeka kuvaka yakakura bhasikoro Network mapazi uye uvandudze kuchovha kwezvivako. Chinangwa chikuru kusvika 30% modal mugove nokuti bikes. Kana uchida kuedza kubva chokufamba Munich pamusoro bhasikoro, unogona kuenda ikoko nechitima kubva Berlin, Vienna, uye Zurich, nezvimwe maguta.
Wagadzirira kubhadhara kushanya kune dzimwe zvakanakisisa kuenda Europe vachishandisa bhasikoro rako chete uye chitima? Gadzirira uchinzvera kwoupenyu hwose, uye bhuku rako chitima matikiti mangwanani!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-bike-friendly-cities%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#Bike-Friendly #Bikes Bike zvine moyo wakanaka europetravel Train Travel